Aqriso: 5 qorshe oo cajiib ah oo Qatar ay ka fulineyso Somalia - Caasimada Online
Home Warar Aqriso: 5 qorshe oo cajiib ah oo Qatar ay ka fulineyso Somalia
Aqriso: 5 qorshe oo cajiib ah oo Qatar ay ka fulineyso Somalia
Shabakadda Caasimadda Online ayaa heshay xog faahfaahsan oo ku saabsan qorshaha ay Wafdigaan u imaadeen Muqdisho iyo Mashaariic waaweyn oo laga fulin doono Muqdisho iyo Gobolada Dalka Soomaaliya.
Wafdigaan iyo Ra’isulwasaaraha Soomaaliya ayaa kala saxiixan doono heshiisyo dhawr ah oo ku saleysan horumarinta dalka Soomaaliya.
Mashaariicda Qatar fulineyso
5) Mashaariic laga fulinayo Gobolada dalka: Sidoo kale Dowladda Qatar ayaa mashaaric hormarineed oo aad u weyn ka fulin doonto qeybo badan oo ka mid ah Gobolada Dalka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa jiro Mashaariicyo kala duwan oo aysan noo suurtagelin inaan helno magacyadooda oo kamid ah heshiisyada ay kala saxiixan doonaan Ra’isulwasaaraha iyo Wafdigaan.
Yaa la siinayaa Qandaraasyada lagu fulinayo Mashaariicdaan?:
Sida uu heshiisku yahay Mashaariicdaan ayaa waxaa fulin doono Shirkado, waxaana la sheegay in qandaraasyadaan lasoo bandhigi doono isla markaasna loo tartami doono, ciddii ku guuleysatana la siin doono.
Shirkadaha fulin doono Mashaariicdaan ayaa waxay isugu jiraan Soomaaliya iyo Qatariyiin, wuxuuna noqon doonaa tartankaas mid xalaal ah oo maalin cad lagu kala baxo.
Guddi la dhisayo:
Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ayaa dhisayo guddi ka kooban labada dal oo mashaariicdaan muhiimka ah ka fullin doono goobaha aan kor kusoo xusnay iyo qeybo kale, waxayna guddigaan si wadajir ah uga shaqeyn doonaan inay wax kasta kusoo dhammaadaan sidii lagu heshiiyey.
Goormee la fulinayaan Mashaariicdaan? :
Inkastoo aysan noo suurtagelin inaan helno waqtiga Mashaariicdaan la fulinayo, haddana xogta aan helnay ayaa sheegeyso inay Mashaariicdaan yihiin kuwa deg deg ah oo dhawaan la fulin doono.
Xogta aan heleyno sidoo kale waxay sheegeysaa inaysan Mashaariicdaan noqon doonin kuwa afka oo kali ah, balse ay noqon doonaan kuwa ficil loo badalo.
Faa’idada Mashaariicdaan ku jirto:
Dalka Soomaaliya oo muddo ku dhex jiray Dagaalo iyo Fowdo ayaa waxaa burburay qeybihii ugu muhiimsanaa dalka, waxayna Mashaariicdaan Soomaaliya ka caawin doonaan waxyaabo badan, waxaana laga faa’idi doonaa in la helo jidad waaweyn oo isku xiro Jowhar iyo Muqdisho, Shabeelada Hoose iyo Muqdisho.
Sidoo kale waxaa la dayactirayaa Xarumaha Dowladda, waxaana markii ugu horeysay la sameyn doonaa Xarun weyn oo u gaar ah Ra’isulwasaaraha dalka, waana arrin ay la gaar noqon doonto Dowladda uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dadaal kasta ku bixineyso sidii dalka loo hormarin lahaa.